Gobolka Sanaag oo ku soo biiray raafka reer koofureedka | KEYDMEDIA ONLINE
Gobolka Sanaag oo ku soo biiray raafka reer koofureedka
Qorshaha Sanaag ayaa daba jooga kii Magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool looga saaray Soomaalida ka soo jeedda Koonfurta Soomaaliya.
CEERIGAABO, Soomaaliya - Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur, oo warbaahinta la hadlay ayaa amar ku bixiyay in dadka ka soo jeeda koofurta Soomaaliya, isaga baxaan gobolka 14 maalin gudahood.
Khaliif, oo dadka ka soo jeedda Gobollada Koofure ee dalka ugu yeeray ajaanib soo shaqo tagatay, ayaa caddeeyay in go’ankaan uu yahay mid ka soo baxay Xukuumadda, isla-markaana wuxuu dadka ku amray in ay isku diyaariyaan dib ugu laabashada dalkooda, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Ganacsatada ka soo jeedda Sanaag iyo dadka, ay shaqooyinka gaarka ah kala dhaxeeyeen dadka dib loo cilinayo ayuu ugu baaqay in ay kala gurtaan, oo ay xisaabaadkooda kala xirtaan 14 malin gudahood.
Kumanan muwaadiniin Soomaali ah, oo ku noolaa, kuna shaqeynsanayay Laascaanood ayaa si qasab ah looga soo saarey todobaadkii hore, waxaana jira degaanno kale, oo si weyn loogu dhibaateeyay shacab aan waxba galabsan.
War shanti bishaan ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu sheegay, in go'aanka musaafurinta tiro shakhsiyaad ah oo ka soo jeeda Koofurta Soomaaliya, ay ku timid arrimo la xiriira amniga, oo ay ku jiraan codsiyo ka yimid bulshooyinka degaanka.